"ဘယျလိုလူတှမှော နစေ့ဉျသောကျဆေး မသုံးသငျ့ဘူးလဲ" - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဆောငျးလအေေးအေးတိုကျတဲ့ ဒီလိုခြိနျ ရာသီဥတုမြိုး…
မွို့ထဲကhotelတှေ ခနျးမတှမှောလဲ မင်ျဂလာဆောငျက သီခငျြးသံတှေ ပြံ့လှငျ့နပေေါ့..
ဝါတှငျးကာလ လှတျခဲ့ပွီမို့… သီတငျးကြှတျ တနျဆောငျမုနျး ကာလတှမှော… ကွငျသူနှဈဦး ဘဝခရီးကို တူတူလြှောကျလှမျးဖို့ ထိမျးမွားမင်ျဂလာ ပွုလုပျပွီးနောကျပိုငျး.. ပိုတိုးလို့လာတဲ့ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး နဲ့ အိမျထောငျရေးတှအေတှကျ တာဝနျပိုလာသလို.. သူမြားတကာနဲ့ ရငျပေါငျတနျးနိုငျအောငျ ကွိုးစားကွရပွနျပေါ့…
ဒီလိုအခါမှာ… စဉျးစားဖို့အတှကျ ကနျြနသေေးတာကတော့.. “အိမျထောငျပွုပွီး ရငျသှေး တနျးယူမှာလား(သို့) အခွအေနတေဈခုခိုငျမာမှ ရငျသှေးယူမှာလား”ဆိုတဲ့ အခကျြလေးပါ… ကလေးမယူခငျြသေးသူတှအေဖို့ရာ သန်ဓတေားဖို့ နညျးလမျးတှေ မြားစှာရှိပါတယျ… သုိ့သျော အမြိုးသမီးအမြားစုအနနေဲ့ လှယျလှယျကူကူနဲ့ နရောတိုငျးမှာ ရတဲ့ ” နစေ့ဉျသန်ဓတေား သောကျဆေး(oral contraceptive pills)” တှကေိုသာ အသုံးပွုကွလရှေိ့ပါတယျ…
သို့သျော အမြိုးသမီးတိုငျးနဲ့ ” နစေ့ဉျသန်ဓတေားသောကျဆေး”ဟာ အသုံးဝငျပါ့မလား… ဘေးထှကျဆိုးကြိုး ရှိမလား… အသကျအန်တရာယျရှိမလားဆိုတာကို သိထားသငျ့ကွတာမို့..
နစေ့ဉျ သောကျဆေး မသုံးသငျ့တဲ့ အမြိုးသမီးမြားအကွောငျးပွောပွခငျြပါတယျ…
– သတိမတေ့တျလှနျးတဲ့ သူမြား(ပုံမှနျနစေ့ဉျ သောကျရတာမို့. ရကျပကျြတဲ့အခါ အကြိုးအာနိသငျမရှိပါ)
– ရာသီသှေးဆငျးတာ ပုံမှနျ မဟုတျသူမြား
– ကလေးမှေးပွီး တဈလ မပွညျ့သေးသူမြား၊ ကိုယျဝနျပကျြကထြားပွီး တဈလမပွညျ့သေးသူမြား
– လောလောဆယျ ကလေးနို့တိုကျမိခငျမြား
– မိမိမှာ ကိုယျဝနျရှိနသေညျဟု သံသယ ရှိသူမြား( သခြောအောငျ စဈပွီးမှ သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ၊ သို့မဟုတျပါက လှယျထားသော ကလေးကိုပါ ထိခိုကျပကျြစီးနနေိုငျပါတယျ)
– သှေးတိုး ဆီးခြိုရှိသူမြား
– သှေးနဲ့ဆိုငျသောရောဂါ ပွသနာ ရှိသူမြား
– ကြောကျကပျအားမကောငျးသူ၊ အသညျးအားနညျးသူမြား
– အမွငျအာရုံနဲ့ ဆိုငျသော ပွသနာရှိသူမြား
– လဖွေနျးထားသူ၊အာရုံကွောအားနညျးသူမြား တှဟော မသောကျသုံးသငျ့ပါဘူး..
ဒါပွငျ မိမိဟာ ဆေးလိပျသောကျတတျသူ ဖွဈပါက သန်ဓတေားဆေးမသောကျသငျ့ပါ.. သို့မဟုတျပါက နှလုံးရောဂါနှငျ့ လဖွေတျဖို့ရာ အခှငျ့အလမျး ပိုမြားနိုငျပါတယျ..
ဒီလိုဆို ဘာတှနေဲ့ သန်ဓတေားကွမှာလဲ..
– သန်ဓတေား သုံးလခံထိုးဆေးမြား
– လကျမောငျးတှငျး(သို့ ) သားအိမျတှငျးထညျ့ သန်ဓတေား ပစ်စညျးမြား
– အမြိုးသား အမြိုးသမီးသုံး အကာအကှယျပစ်စညျးမြား (condoms)
– diaphragm ချေါ အမြိုးသမီးသုံး သန်ဓတေား ပစ်စညျး
– အရေးပျေါသန်ဓတေားဆေး(အမွဲ အသုံးပွုပါက အမြိုးသမီး ကနျြးမားရေးကို ဆိုးဝါးစှာ ထိခိုကျစနေိုငျပါသညျ)
– natural family planning ချေါ အမြိုးသမီးရာသီနှငျ့ ခြိနျကိုကျကာ အတူနခွေငျး(ရာသီသှေး မမှနျသော အမြိုးသမီးမှာ ရငျသှေးရဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားနိုငျပါသညျ)
– sterilization ချေါ သားကွောဖွတျခွငျး(ကနျြးမာရေးဌာနမြားမှ ခှငျ့ပွုခကျြရမှာသာ ပွုလုပျနိုငျပါသညျ) အစရှိတာတှကေို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ…
သို့သျော မိမိနဲ့ ကိုကျညီမှုရှိသော သန်ဓတေားမှု ပုံစံကို ဆရာဝနျ ၊ သားဖှားမီးယပျ အထူးကု တို့နှငျ့ သခြောစှာ ပွသ တိုငျပငျပွီးမှသာ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ.. ဒါမှသာ မဖွဈသငျ့သော ဆိုးကြိုးမြားကို ကာကှယျတားဆီးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျလို့ သတိခပျြနိုငျရနျ အသိပေး ရေးသားလိုကျရပါတယျ…
သာယာ လှပသော အိမျထောငျမှု ဘဝကို ပိုငျဆိုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆု မတ်ေတာပွုလကျြ….
“ဘယ်လိုလူတွေမှာ နေ့စဉ်သောက်ဆေး မသုံးသင့်ဘူးလဲ”
​ဆောင်း​လေ​အေး​အေးတိုက်​တဲ့ ဒီလိုချိန်​ ရာသီဥတုမျိုး…
မြို့ထဲကhotel​တွေ ခန်းမ​တွေမှာလဲ မင်္ဂလာ​ဆောင်​က သီချင်းသံ​တွေ ပျံ့လွှင့်​​နေ​ပေါ့..
ဝါတွင်းကာလ လွှတ်​ခဲ့ပြီမို့… သီတင်းကျွတ်​ တန်​​ဆောင်​မုန်း ကာလ​တွေမှာ… ကြင်​သူနှစ်​ဦး ဘဝခရီးကို တူတူ​လျှောက်​လှမ်းဖို့ ​ထိမ်းမြားမင်္ဂလာ ပြုလုပ်​ပြီး​နောက်​ပိုင်း.. ပိုတိုးလို့လာတဲ့ စီးပွား​ရေး၊ လူမှု​ရေး​ နဲ့ အိမ်​​ထောင်​​ရေး​တွေအတွက်​ တာဝန်​ပိုလာသလို.. သူများတကာနဲ့ ရင်​​ပေါင်​တန်းနိုင်​​အောင်​ ကြိုးစားကြရပြန်​​ပေါ့…
ဒီလိုအခါမှာ… စဉ်းစားဖို့အတွက်​ ကျန်​​နေ​သေးတာက​တော့.. “အိမ်​​ထောင်​ပြုပြီး ရင်​​သွေး တန်းယူမှာလား(သို့) အ​ခြေအ​နေတစ်​ခုခိုင်​မာမှ ရင်​​သွေးယူမှာလား”ဆိုတဲ့ အချက်​​လေးပါ… က​လေးမယူချင်​​သေးသူ​တွေအဖို့ရာ သ​န္ဓေတားဖို့ နည်းလမ်း​တွေ များစွာရှိပါတယ်​… သုိ့​သော်​ အမျိုးသမီးအများစုအ​နေနဲ့ လွယ်​လွယ်​ကူကူနဲ့ ​နေရာတိုင်းမှာ ရတဲ့ ” ​နေ့စဉ်​သ​န္ဓေတား ​သောက်​​ဆေး(oral contraceptive pills)” ​တွေကိုသာ အသုံးပြုကြ​လေ့ရှိပါတယ်​…
​သို့​သော်​ အမျိုးသမီးတိုင်းနဲ့ ” ​နေ့စဉ်​သ​န္ဓေတား​သောက်​​ဆေး”ဟာ အသုံးဝင်​ပါ့မလား… ​ဘေးထွက်​ဆိုးကျိုး ရှိမလား… အသက်​အန္တရာယ်​ရှိမလားဆိုတာကို သိထားသင့်​ကြတာမို့..
​နေ့စဉ်​ ​သောက်​​ဆေး မ​သုံးသင့်​တဲ့ အမျိုးသမီးများအ​ကြောင်း​ပြောပြချင်​ပါတယ်​…
– သတိ​မေ့တတ်​လွန်းတဲ့ သူများ(​ပုံမှန်​​နေ့စဉ်​ ​သောက်​ရတာမို့. ရက်​ပျက်​တဲ့အခါ အကျိုးအာနိသင်​မရှိပါ)
– ရာသီ​သွေးဆင်းတာ ပုံမှန်​ မဟုတ်​သူများ
– က​လေး​မွေးပြီး တစ်​လ မပြည့်​​သေးသူများ၊ ကိုယ်​ဝန်​ပျက်​ကျထားပြီး တစ်​လမပြည့်​​သေးသူများ
– ​လော​လောဆယ်​ က​လေးနို့တိုက်​မိခင်​များ
– မိမိမှာ ကိုယ်​ဝန်​ရှိ​နေသည်​ဟု သံသယ ရှိသူများ( ​သေချာ​အောင်​ စစ်​ပြီးမှ ​သောက်​သုံးသင့်​ပါတယ်​၊ သို့မဟုတ်​ပါက လွယ်​ထား​သော က​လေးကိုပါ ထိခိုက်​ပျက်​စီး​နေနိုင်​ပါတယ်​)
– ​သွေးတိုး ဆီးချိုရှိသူ​များ
– ​သွေးနဲ့ဆိုင်​​သော​ရောဂါ ပြသနာ ရှိသူ​များ
– ​ကျောက်​ကပ်​အားမ​ကောင်းသူ၊ အသည်းအားနည်းသူများ
– အမြင်​အာရုံနဲ့ ဆိုင်​​သော ပြသနာရှိသူများ
– ​လေဖြန်းထားသူ၊အာရုံ​ကြောအားနည်းသူများ ​တွေဟာ မ​သောက်သုံးသင့်​ပါဘူး..
ဒါပြင်​ မိမိဟာ ​ဆေးလိပ်​​သောက်​တတ်​သူ ဖြစ်​ပါက ​သ​န္ဓေတား​ဆေး​မ​သောက်​သင့်​ပါ.. သို့မဟုတ်​ပါက နှလုံး​ရောဂါနှင့်​ ​လေဖြတ်​ဖို့ရာ အခွင့်​အလမ်း ပိုများနိုင်​ပါတယ်​..
ဒီလိုဆို ဘာ​တွေနဲ့ သ​န္ဓေတားကြမှာလဲ..
– သ​န္ဓေတား သုံးလခံထိုး​ဆေးများ
– လက်​​မောင်းတွင်း(သို့ ) သားအိမ်​တွင်းထည့်​ သ​န္ဓေတား ပစ္စည်းများ
– ​အမျိုးသား အမျိုးသမီးသုံး အကာအကွယ်​ပစ္စည်းများ (condoms)
– diaphragm ​​ခေါ် အမျိုးသမီးသုံး သ​န္ဓေတား ပစ္စည်း
– အ​ရေး​ပေါ်သ​န္ဓေတား​ဆေး(အမြဲ အသုံးပြုပါက အမျိုးသမီး ကျန်းမား​ရေးကို ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်​​စေနိုင်​ပါသည်​)
– natural family planning ​ခေါ် အမျိုးသမီးရာသီနှင့်​ ချိန်​ကိုက်​ကာ အတူ​နေခြင်း(​ရာသီ​သွေး မမှန်​​သော အမျိုးသမီးမှာ ရင်​​သွေးရဖို့ ရာခိုင်​နှုန်းများနိုင်​ပါသည်​)
– sterilization ​ခေါ် သား​ကြောဖြတ်​ခြင်း(ကျန်းမာ​ရေးဌာနများမှ ခွင့်​ပြုချက်​ရမှာသာ ပြုလုပ်​နိုင်​ပါသည်​) အစရှိတာ​တွေကို အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​…
သို့​သော်​ မိမိနဲ့ ကိုက်​ညီမှုရှိ​သော သ​န္ဓေတားမှု ပုံစံကို ဆရာဝန်​ ၊ သားဖွားမီးယပ်​ အထူးကု တို့နှင့်​ ​သေချာစွာ ပြသ တိုင်​ပင်​ပြီးမှသာ အသုံးပြုသင့်​ပါတယ်​.. ဒါမှသာ မဖြစ်​သင့်​​သော ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်​တားဆီးနိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါတယ်​လို့ သတိချပ်​နိုင်​ရန်​ အသိ​ပေး ​ရေးသားလိုက်​ရပါတယ်​…
သာယာ လှပ​သော အိမ်​​ထောင်​မှု ဘဝကို ပိုင်​ဆိုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု ​မေတ္တာပြုလျက်​….